Version 0.9.7.0 – Fanamboarana sy manasongadina manodidina, ary SuperProxy Alfa
Jona 6, 2015 amin'ny tolotra 2 Comments
New Version eto!
Mba hanatsarana! Mba Miangavy Re, Mba hanatsarana! Sitraka amin'ny siramamy sasany eo an-tampony.
Nahoana no tokony hanatsarana?
Io dikan-fanamboarana ny Google fanomezam-pahefana fanohanana, izay midika fa ny mandeha ho azy Google Translation dia hiasa indray.
Io dikan-fanazavana vaovao ny base de données endrika, izay midika hoe WordPress 4.2 no nanohana, ary ianao dia antenaina mba hamonjy ~ 40% ny ny latabatra ankehitriny haben'ny
Farany isika manana dika voalohany ny fandikan-teny backend mpamoaka lahatsoratra, dia hasehoko anao ny kofehy tena olona nandika ary hamela anao hamerina haingana sy hamafa ireo.
Ahoana no tokony hanatsarana?
Ny sasany vintana, manana ny safidy mba hanatsarana fotsiny eo amin'ny WordPress Dashboard. Misy kevitra fa tahiry, toy ny tsy misy lalana miverina taorian'ny upgrade ny base de données efa vita.
Any quirks, olana, olana – ny mifandraisa antsika hamorona ny namanao.
Inona no SuperProxy ary nahoana ianao no tokony hahatonga ity?
SuperProxy no vaovao “Get manan-karena haingana” tetika. Hmm…
Raha ny marina, isika mampiasa ny farany nodes mba hamela ireo orinasa sy ny isam-batan'olona mba hanana fizarana fahafahana miditra amin'ny aterineto. Isika no handoa ity fifamoivoizana, koa raha nividy fampiantranoana asa fanompoana sy ianao taonina ny angon-drakitra mamindra ianareo tsy mampiasa, isika, dia tena hankasitraka fa hahafahan'ny endri-javatra ity, dia hanohana antsika ary mety ho very maina ny mbola. Ho hamoaka antsipirihany bebe kokoa ny momba izany rehefa ho misy.
Ary – ho any amin'ny sisa amin'ny changelog:
Woo fampidirana fanamboarana
Kady izy roa ny Base64 Encoding sy hampihenana ny haben'ny translatable pejy
Widget fanamboarana mahatonga saina mampiseho tsara rehefa boaty diso sizing nampiasaina
Fanesorana ny anoloan'ny fandrosoana farany Bar, dia mahalana hita na ampiasaina, ary niteraka mainka sarotra ny dia noho ny tamin'ny mendrika
3 fiteny vaovao tohanan'ny Bing
tsy fandikan-teny ny tsy text / json votoaty fanamboarana olana miaraka amin'ny Download Adaona Plugins
Manohana ny placeholder toetra, misaotra Mark Serellis
Misy fanohanana ho amin'ny raharaha Directory plugin
Izany – Ankafizo io dikan-, ary aza ho olon-kafa, aoka isika mahalala ny fomba miasa ho anao.
Nametraka Under: Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: dikanteny google, tsy ampy taona, fanafahana
Version 0.8.5 – Koa isika manohana Lao
Septambra 17, 2012 amin'ny tolotra Leave a Comment
Ny sahona sy ny totozy tonga soa Laos
Tsara, Nanambara tao amin'ny Google fotsiny ny nandika bilaogy fa Hanohana Lao, fiteny ofisialy ny Laos, ka efa nanampy ny fehezan-dalàna takiana ka nanao hanafahana haingana amin'ny fanohanana fiteny io, izay ihany koa tohanan'ny Ora iray Translation.
Ny dikan-dia efa avy nandritra ny andro vitsivitsy, fa ny tena olana amin'ny fahazoana mivantana ity lahatsoratra ity dia mahita sary. Isika tsy fantatro tsara hoe izany no sary tsara indrindra, fa, fara fahakeliny, izany fanononana.
Mifalia vaovao io dikan-.
Nametraka Under: General Messages, Release filazana Tagged Miaraka: dikanteny google, tsy ampy taona, fiteny maro, fanafahana
Version 0.8.0 – Fanafihana ny APIs
Novambra 29, 2011 amin'ny tolotra 65 Comments
Rehefa miady APIs
Tsara mialoha ny fe-potoana avy amin'ireo Google amin'ny teny API hampitsahatra miasa, izahay, tamin'ny farany afaka manangona io famoahana vaovao. Ity iray ity nanaraka fe-potoana lava be ny zava-manahirana izay natolotra noho ny zokiny dikan-, indrindra noho ny hoe Google nanapa-kevitra fa mety hampidi famerana ny fampiasana ny fe-potoana eo anoloan'ny izay nahatonga ny teo aloha manohana ny fangatahana dikan-nampitombo haingana be ny vaovao avo. Ny Google fiovana ihany koa ny mahatonga ny API fetra ao amin'ny fandikan-teny Bing API, satria ireo ara mpampiasa milina, izay tena tototry ny Transposh coded mafy API fanalahidy ho an'ny Bing.
Tamin'izay fotoana izay dia nanana mafy pirinty, izay toa toy ny zavatra tsara halefa, fa tsy misy, tsy maintsy manana ny lafiny hafa amin'ny, Noho izany dia tapa-kevitra ny hamahana ny olana ny maro Widgets fanohanana (ary ny anaram-boninahitra koa fifantenana, yippee!). Toa tena nizotra tamin'izay hitsiny? fa tsy misy, Niteraka izany Avereno soratana lehibe ny foto-drafitr'asa anaty filatron-dahatsoratra koa. Raha ny marina izany fanatsarana tena tanteraka amin'ny fanovàna ny fomba CSS nanampy, ary ny fomba ny Widgets nampahafantatra ny lohamilina ny fiovana eo amin'ny teny (dia izao tsy misy tsy ilaina POST niantsoana azy ho ao lohamilina). Raha nanoratra fa izahay dia mba tsara vintana fa tafintohina amin'ny iray PHP5.3 ny PHP5.2 olana tsy mifanaraka amin'ny napetraka ny olana hafa izay natao ny famoahana indray herinandro hafa. Te-hisaotra ireo mpampiasa maro izay no handeferako ny beta famotsorana, ary nanampy anay hahita olana izay niafina tao amin sosona ny mari-pamantarana sy be pitsiny.
Izahay koa dia nandray izany fahafahana hanova ny teny kely, raha maneho Google dokam-barotra avy AdSense amin'ny nadika pejy, dia handray 1/1000 izany toerana ampiasaina miaraka amin'ny fehezan-dalàna manokana adsense, ka raha Transposh no manampy anao hiteraka ny fidiram-bola ny $ 10K ianao dia mividy antsika kafe! Ka misaotra! Mba hanazavana ny zavatra somary, tsy mamorona dokambarotra fanampiny toerana eo amin'ny pejy, ary tsy misy dokam-barotra na ampidiro hanova ny fisehon'ny, raha misy dokam-barotra, manao na inona na inona. Raha ny hevitrao fa izany no mangataka be loatra, fotsiny dia mety hamafa ny plugin, misioka miray feo malefaka, ary ho eo amin'ny fomba. Raha te fahazoan-dalana ara-barotra, tsy mivarotra azy mbola, fa angamba lafo kokoa Ho.
Fanovana hafa dia ahitana dikan izany:
Koa Catalan sy Hindi ny fanohanany an'i Bing – miteny ho azy.
Dropdown anaty filatron-dahatsoratra kokoa CSS – izany raha ny marina kokoa dia mijery izao.
Fanohanana Memcached – raha APC sy ny caches opcode ireo be loatra ho anareo, ankehitriny ianao dia afaka mampiasa memcached ary manana be dia be mahafinaritra.
Tsara kokoa 404 pejy fikirakirana (Tsy mamorona rohy vaovao amin'ny tsy misy pejy) – izay midika hoe ny Google crawler dia hassle ny toerana tsy.
Nifidy caching amin'ny rackspace cloudsites – efa x-cache cache nametraka ny opcode, fa tsy fitadidiana mpampiasa, izay nahatonga ny firongatry amin'ny logfiles – ankehitriny raikitra.
Kely kokoa maro fixes – Mety isaina ireo, nefa tsy ampy ny rantsan-.
Tiorka Translation amin'ny Semih Yeşilyurt.
Manantena izahay fa hahazo izany ianao dikan-, ary toy ny foana, miandry ny soso-kevitrao, hevitra, soso-kevitra sy ny afo.
P.S – Voasedra amin'ny WordPress 3.3 beta4, miasa lehibe.
Nametraka Under: Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: Ajax, Bing (MSN) mpandika teny, bugfix, dikanteny google, fanafahana, anaty filatron-dahatsoratra, xcache
Version 0.7.5 – Ny andro lava indrindra ++
Jona 22, 2011 amin'ny tolotra 23 Comments
Fanohanana 5 Indic kokoa fiteny
Indray andro rehefa fahavaratra no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny Ila Bolantany Avaratra, mirehareha isika manolotra dikan- 0.7.5 ny plugin. Izany dikan manampy fanohanany ny fiteny vaovao izay nambara ho nanohana ankehitriny amin'ny Google amin'ny teny – Bengali, Gujarati, Kannada, Tamil sy Telugu.
Talohan'ny nihazakazaka fiteny hanampy ireo ny bilaogy, azafady hahatsiaro ho fiteny ireo mampiasa ny ajax hisolo mba hiasa tsara, izay midika fa miteraka enta-mavesatra eo amin'ny lohamilina eo amin'ny fihaonany voalohany tamin'ny kofehy fandikan-teny vaovao (manery azy mba haka ny fandikan-teny avy amin'ny Google). Toy izany koa ny safidy anao, fa ianareo kosa efa nampahafantatra…
Bebe kokoa mihoatra izany ny safidy dikan koa tsy mba handresy ny Default locale amin'ny Transposh ny Default fiteny, fitondran-tena ity (vaovao ao amin'ny 0.7.4) Mu namela mpampiasa mba manana Admin pejy amin'ny fiteny, fa amin'ny lafiny iray hafa mpampiasa sosotra izay te hitantana ny toerana amin'ny teny hafa noho ny Default, ka izao no configurable.
Efa nihatsara ny fandikan-teny ihany koa ny UI, ny manaraka sy ny teo aloha izao hovonjena bokotra fanovana atao, ary ny fifanakalozan-kevitra dia tsy ho indray mifantoka eo manindry bokotra ireo.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: 0.7, dikanteny google, tsy ampy taona, fiteny maro, fanafahana, UI, WordPress plugin